State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi takes part in ASEAN-Australia summit – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attended the ASEAN-Australia Special Summit in Sydney, Australia, yesterday, along with other ASEAN and Australian state leaders and prominent government figures.
Australian Prime Minister Malcolm Turnbull welcomed the guests, followed by the opening address by Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, who is the 2018 ASEAN chairman.
The State Counsellor then engaged in discussions with the ASEAN and Australian leaders on collaborations, bilateral business cooperation and counter-terrorism.
The ASEAN-Australia summit first began in 1974 as the ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme (AAECP). Myanmar celebrated the 40th-year anniversary of the ASEAN-Australia relations in Nay Pyi Taw and agreed to hold the ASEAN-Australia summits once every two years. The recent summit aims to enhance regional security and prosperity.
The State Counsellor then attendedaformal lunch hosted by Governor-General of Australia Sir Peter Cosgrove, AK (Knight of the order of Australia), MC (Military Cross), and his wife. She then tookacommemorative photograph with other ASEAN and Australian leaders.
Later, the State Counsellor attendedaprivate meeting with ASEAN and Australian leaders at the Governor-General’s Admiralty House. Australian Prime Minister Turnbull and Singapore Prime Minster Lee Hsien Loong acted as joint chairpersons at the meeting. State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi discussed Myanmar’s development progress, its challenges, international relations and regional situations with other participants.
The leaders then affirmed the Sydney Declaration inajoint statement from the ASEAN-Australia summit. Daw Aung San Suu Kyi then visited Canberra on the Prime Minister’s invitation.
The State Counsellor arrived in Fairbairn Airport in Canberra around6p.m. and was greeted by Australian Assistant Minister for Science, Jobs and Innovation Senator Zed Seselja, Australian Ambassador to Myanmar Nicholas Coppel, Myanmar Ambassador to Australia U Thar Aung Nyunt, his wife, and other officials.
The State Counsellor and her entourage then left for the Hyatt hotel at the end of the day.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဆီယံ – သြစတြေးလျ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးနှင့် သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
ကင်ဘာရာ၊ မတ် ၁၈
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေး (မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် သီးသန့်အစည်းအဝေး)သို့ တက်ရောက်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ International Convention Centre ၌ကျင်းပသည် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲတွင် သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်ကွန်တန်ဘဲလ်က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အာဆီယံ – သြစတြေးလျ ဆွေးနွေးဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အာဆီယံနိုင်ငံများ နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ – သြစတြေးလျ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များအကြား သဘောထားအမြင်များကို ဖလှယ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ ပထမဦးဆုံးဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာဆီယံ သြစတြေးလျ ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေးကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ နှစ် (၄၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အစည်းအဝေးတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများကို (၂) နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ကျင်းပရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။ သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး လက်ခံ ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ-သြစတြေးလျ ညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အထိတာဝန် ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါအာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးနှင့် သီးသန့်အစည်းအဝေးဟူ၍ အပိုင်း(၂)ပိုင်း သတ်မှတ် ကျင်းပကာ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ Enhancing Regional Security and Prosperity ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ ဘုရင်ခံချုပ် H.E. Sir Peter Cos grove AK MC နှင့် ဇနီးတို့က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေလယ်စာ စားပွဲသို့တက်ရောက်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့နှင့် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ ဘုရင်ခံချုပ် နေအိမ်ဧည့်ခန်းမ (Admiralty House, The Drawing Room) ၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများ နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ မဲလ်ကွန်တန်ဘဲလ်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ လီရှန်လွန်းတို့က ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် အာဆီယံ-သြစတြေးလျညှိနှိုင်းရေးမှူး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အခြေအနေနှင့် ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်များကို ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အာဆီယံ-သြစတြေးလျ အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေး၏ ပူးတွဲကြေညာချက်ဖြစ်သည့် Sydney Declaration ကို အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ကင်ဘာရာမြို့သို့ ထွက်ခွာသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ တပ်မတော်အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ဆစ်ဒနီမြို့မှ ထွက်ခွာရာ ဒေသစံတော် ညနေ ၆ နာရီ မိနစ် ၂၀ ကင်ဘာရာမြို့ Fairbairn တပ်မတော်လေဆိပ် ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အား သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ သိပ္ပံ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်ဝန်ကြီး Senator the Hon Zed Seselja၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Nicholas Coppel၊ သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်နှင့် ဇနီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ခေတ္တတည်းခိုမည့် ကင်ဘာရာမြို့ Hyatt Hotel သို့ ရောက်ရှိကြသည်။